Kufunga kwakakosha Pakusarudza Pfungwa Yekutengesa (POS) Maitiro | Martech Zone
Kufunga kwakakosha Kana Uchisarudza Pfungwa Yekutengesa (POS) Maitiro
Chishanu, December 27, 2019 Chishanu, December 27, 2019 Douglas Karr
Nzvimbo yekutengesa (POS) mhinduro dzaimbove nyore, asi pari zvino paine sarudzo dzakasiyana siyana, imwe neimwe ichipa akasiyana maficha. Yakasimba poindi yekutengesa sevhisi inogona kuita kuti kambani yako inyatsoita basa uye ive nemhedzisiro pane iyo yepasi mutsara.
Chii chinonzi POS?
A Nzvimbo yekutengesa system mubatanidzwa wehardware uye software inoita kuti mutengesi atengese uye aunganidze kubhadhara kwenzvimbo yekutengesa. Mazuva ano POS masisitimu anogona kunge ari software-based uye anogona kushandisa chero generic mbozhanhare, piritsi, kana desktop. Tsika dzePOS dzechinyakare dzinowanzo sanganisira dhairekitori rekushandisa pamwe nekubata skrini yekutsigira uye kusangana kwemadhirowa emari.
Ichi chinyorwa chichafukidza zvese zvaunoda kuti uzive kuti usarudze chaiyo poindi yekutengesa software kune rako bhizinesi. Nemhinduro dzakasiyana dzakasiyana dziripo, zvakakosha kuti uongorore zvisati zvaitika uye woziva iyo inowirirana nezvinodiwa nemuchina wako.
Icho Chinongedzo Chekutengesa Sisitimu Chaicho Chinodiwa?
Mamwe mabhizinesi anoedza kudzikisa mutengo nekuita pasina poindi yekutengesa mhinduro, asi mari iyi inokwanisa ita mari yekambani yako. Mari shoma yaunoshandisa pakubhadharisa hapana kana ichienzaniswa nenguva nemari yauchachengetedza zuva rega rega rebasa.
Pamusoro pekurerutsa mashandisirwo, epanhasi nzvimbo yekutengesa kunyorera inopa yakakura suite yezvishandiso zvakagadzirirwa kuti zvese zvikamu zvebhizimusi rako zvifambe zvakanaka. Kana iwe uchida kutarisa pahukama hwevatengi, semuenzaniso, unogona kuwana poindi yekutengesa mhinduro dzinosanganisira zvirongwa zvekuvimbika nezvimwe zvinhu zvakakosha. Zvakare, mazhinji masevhisi anosanganiswa mushe pamwe nemamwe mafomu anozivikanwa senge Shopify uye Xero.
MaSystem Akasiyana eMabhizinesi Akasiyana
Point yekutengesa masevhisi anotarisa akasiyana seti emakambani anosanganisira vese vari online vatengesi uye mabhizinesi ane epanyama zvitoro. Uine izvozvo mupfungwa, haufanire kunge uine dambudziko rekuwana sarudzo inoenderana nebhajeti yako uye saizi yechiratidzo chako.
Kupfuurirazve zvimwe, zvakawandisa masisitimu ari kutamira kune yegore-yakavakirwa nzira iyo inosarudzira ruzivo nekurudimbura kubva kune chero chinhu chigadzirwa. Nepo tsika dzechinyakare dzichiripo, cloud-based alternatives vari kuramba vachikurumbira.
5 Kukosha Kufunga Pakusarudza POS
Hardware - Nzvimbo dzakasiyana dzekutengesa masisitimu akagadzirirwa kushanda nemhando dzakasiyana dzehardware, uye unofanirwa kufunga nezvezvinodhurirwa nemari kana uchienzanisa zvaunogona kuita. Kana iwe uchikwanisa kumhanyisa iyo POS nefoni chete, semuenzaniso, urikurerutsa mashandiro iwe uchiwedzera zvishoma-kune-kwete pamusoro. Kune rimwe divi, mamwe mapurogiramu anoshanda zvirinani nemahwendefa kana zvishandiso zvakatsaurirwa, izvo zvinogona kutungamira kune zvakanyanya mutengo. Uyezve, mabhizimusi akakura uye maresitorendi anowanzoda huwandu hwakawanda hwehardware, kusanganisira zvinhu zvakaita semaprinta emarisiti, zviteshi zvetafura manejimendi, nezvimwe.
Payment Gateways - Kutenga POS system hazvireve kuti iwe wabatanidza nzira yekubhadhara kadhi rechikwereti. Kunyange masisitimu mazhinji ePOS achiuya akafanogadzirirwa muverengi wekadhi rechikwereti, mamwe angangoda kumisikidzwa, izvo zvinogona kukubhadharira. Tsvaga POS ine yakaunganidzwa kadhi muverengi kana iyo inogona kusangana nekadhi kiredhiti kuverenga kubva kune yako yekubhadhara processor uye gedhi.
Chechitatu-bato Kubatanidzwa - Mabhizinesi mazhinji atove kushandisa maturusi ekugadzirwa, uye zvakakosha kuti uwane nzvimbo yekutengesa inoshanda inoshanda nemaitiro ako aripo. Kubatanidzwa kwakakurumbira kunosanganisira masystem ekuverenga, masystem evashandi, masystem ekuverenga, masisitimu ekuvimbika kwevatengi, uye masevhisi ekutumira Square's point of sale system, semuenzaniso, inosangana kune akasiyana matatu echitatu mapato mapuratifomu ezvese kubva kuCommerce kuenda kushambadziro uye accounting. Pasina kubatanidzwa, kuwedzera masevhisi matsva kumasangano esangano rako kunogona kuomesa kuita kwakakosha mabasa. Pfungwa yekutengesa masisitimu ndeye zvese nezve kugona, saka hazvina basa kushandisa chikuva chisingataure nezvimwe zvinoshandiswa. Semuenzaniso, kuendesa otomatiki mashandisirwo mune accounting account kunonyanya kushanda pane kuendesa nemaoko pakati pezvishandiso.
chibatiso - Vatengi vanotora yavo yekuvanzika zvakanyanya zvakanyanya kupfuura nakare kose, uye data hacks zvinoshamisika zvakajairika pakati pemabhizinesi eese saizi. Mamaneja anowanzo kurerutsa kukosha kwekuchengeta data rakachengeteka, uye izvi zvinonyanya kukosha kana vatengi vachipa ruzivo rwakakomba senge nhamba dzekadhi rechikwereti. Iyo Kiredhiti Kadhi Indasitiri inotsanangura zvine mutsindo kuchengetedzeka zviyero zveinongedzo yekutengesa masisitimu uye dzimwe nzira dzekubhadhara kubhadharisa. Mapurogiramu anozivikanwa anowanzoenderana nematanho aya, asi iwe unogona zvakare kutsvaga kumwe kudzivirirwa kwakasimba, senge kudzoreredzwa kwedata uye kupera kunogumira kunyorera. Kuchengetedza kunofanirwa kuve chimwe chezvinhu zvako zvepamusoro zvekutanga kana uchitsvaga yakavimbika POS app.
tsigira - Unogona kusazofunga rutsigiro sechinhu chakakomba, asi murombo rutsigiro network inogona kuita kuti poindi yako yekutengesa ive yakaoma kushandisa. Sarudzo dzakavimbika dzinopa rutsigiro rwusingaperi uye dzinokubatsira kugadzirisa matambudziko vasati vakanganisa bhizinesi rako. Kana zvichibvira, iwe unofanirwa kutsvaga sevhisi iyo inopa 24/7 rutsigiro. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti mumwe munhu achapindura pese paunenge uchinetseka nehurongwa. Zvimwe zvinoshandiswa zvinopa vashandisi vatsva pa-saiti rubatsiro sezvavanomisa sevhisi kwekutanga. Mabhizimusi madiki anowanzo bvisa kuisa mari munzvimbo yekutengesa mhinduro, asi kunyoreswa kwepamusoro-soro kunogona kuve kwakakodzera kumakambani ehukuru hwese Izvi ndizvo zvimwe zvezvakanyanya kukosha zvinhu zvekuchengetedza mupfungwa kana uchienzanisa poindi yekutengesa masevhisi.
Tags: gore POSgore-based posmobile poskubhadhara gatewayPospos Hardwarepos softwaretouch screen